BBC Somali - Warar - Xiriirka Soomaalida iyo Booliiska
Xiriirka Soomaalida iyo Booliiska
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Oktoobar, 2012, 09:46 GMT 12:46 SGA
Waxay Ila TahayMaqal53:41
Barnaamijka waxay ila tahay ee Jimcahan waxaan ku eegnay Xiriirka Soomaalida iyo Booliiska ka dhexeeya.
Aragtida dadka Hargeisa ee BooliiskaMaqal02:56
Dadwaynaha Hargeisa oo aragtidooda ka dhiibanaya xiriirka dadka iyo booliiska.
Midowga Africa, ayaa tababar la xiriira dambi-baarista uga furay ciidamo booliis ah Magaalada Muqdisho. Booliiska NairobiMaqal04:03
Soomalida degan Nairobi ayaa sheegaya in booliska ay lacag ka qaataan.
Dadwaynaha Puntland iyo Booliiska, xiriir noocee ah baa ka dhaxeeya. Sugidda amniga MuqdishoDaawo01:36
Si loo joojiyo weerarada mustaqbalka ee caasimadda Muqdisho, ayaa ciidamada Soomaalida iyo kuwa midowga Africa ay bilaabeen olole ay guyahana hub kaga baarayaan, isla markaana ku xirxirayaan xubanaha koox al-Shabab ee al-Qaacidda xiriirka la leh. War